UCHRISSY TEIGEN UKUCIMA I-1M YABALANDELI ABATHUMELA UKUFUMANA INZONDO NJENGE 'PEDO' - UBONISO
UChrissy Teigen akasenakuphinda ayithathe. Umbhali wencwadi yokupheka wenze inyathelo elikhulu lokuhlasela abo bamthiyileyo ebomini bakhe.
UChrissy Teigen akanakuyithatha kwakhona. Umbhali wencwadi yokupheka wenze inyathelo elikhulu lokuhlasela abo bamthiyileyo ebomini bakhe. I-ex-supermodel kunye nomama wababini kutshanje bebe phantsi koqwalaselo olukhulu lweendaba. Emva kwesityholo sokudityaniswa noJeffrey Epstein, isaphuli-mthetho ngokwesondo, uTeigen ebefumana izoyikiso zempambano.
Ukugcina uxolo kunye noxolo, uChrissy uthathe inyathelo elikhulu.
UChrissy ususe abalandeli be-1M be-Twitter?
Imidlalo yeChrissy Teigen i-13M enkulu elandelayo iakhawunti yakhe ye-Twitter . Kodwa kutsha nje, ugqibile ukucima i-1M yabo, ngokunikwa inkathazo ebebeyibangela ebomini bakhe.
uluhlu lwe-anime yothando
UChrissy wayenzile Kucacile ukuba wayengenabudlelwane no-Epstein kwaye wayengazange wadibana nale ndoda. Kodwa ngaphandle kwamabango akhe, abantu bebesamtyhola ngokuzibandakanya kwakhe nomxhaphazi ngokwesondo nomrhwebi wabantwana-uTeigen.
UTeigen, naye ongumama wabantwana ababini, uyasokola ukumelana nezi mabango zempambano.
yinkosana yenamba ngaphezulu
UChrissy ubizwa ngokuba ngu-Pedophile
Abantu kwi-Twitter ngamanye amaxesha bebebiza abantu abadumileyo ukuba ngabahambi ngononophelo. Amabango anje enze ukuba uChrissy akhathazeke ngentlalontle yosapho lwakhe. Ukongeza ekususeni i-1 yezigidi zabalandeli bakhe, imodeli iqhubekile nokucima i-60, 000 yezithuba zeTwitter ngokunjalo. Uye wathi ucinga ngokuyeka i-Twitter njengoko imbangela iingxaki ezininzi engqondweni.
UJeffrey Epstein wafunyanwa enetyala lokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, ekuthiwa laqala kwiminyaka engama-25 eyadlulayo. Wayezibulale ngaphambi nje kwetyala lakhe. Igama likaChrissy Teigen lalinxulunyaniswa naye, kwaye kwakusithiwa wamnceda ekwenzeni ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni.
La mabango anjalo ukudlala umonakalo kubomi bukaChrissy. Uyachacha emva kotyando, kwaye zonke ezi zityholo zithatha impilo yakhe. Akakwazi ukuthatha amayeza akhe ngenxa yoxinzelelo.
UChrissy Teigen naye uvule malunga nefuthe 'lePizzagate' kwimpilo yakhe yengqondo. Ukutyhila ukuba wayekhe wajongana nentiyo ethile 'ye-intanethi emnyama' kutsha nje.
'I-Pizzagate' ibhekisa kwisibini esifumana i-pizza emojis kwicandelo labo lamagqabantshintshi kwaye bekhomba kwi-pedophilia.
nini umbulali weedemon u-2 ephuma kwi-netflix
Kwiindaba zamva nje, uTeigen uxele kwangoko ngoLwesine ukuba yena nomyeni wakhe, uJohn Legend, ngelishwa baphulukene nosana lwabo phakathi ekukhulelweni.
Sothukile kwaye kuhlobo lwentlungu enzulu oyivayo kuphela, uhlobo lwentlungu esingazange sayiva ngaphambili, wabhala uTeigen kuTwitter. Asizange sikwazi ukunqanda ukopha kwaye sanika umntwana wethu ulwelo aludingayo, ngaphandle kweengxowa kunye neebhegi zotofelo-gazi. Kwakunganele nje.
Uluhlu lwecw crossover episode
umzingeli x umzingeli ixesha lesi-7 2021
elona xesha limnandi losapho